Xidiga Manchester United Ee Anthony Elanga Oo Ku Dhawaaday Inuu Ku Biiro Manchester City
HomeHoryaalka IngiriiskaXidiga Manchester United ee Anthony Elanga oo ku dhawaaday inuu ku biiro Manchester City
January 19, 2022 Horyaalka Ingiriiska, Wararka Ciyaaraha 0
Da’yarka Manchester United Anthony Elanga ayaa ku dhawaaday inuu ku biiro kooxda ay xafiiltamaan ee Manchester City ka hor inta uusan u dhaqaaqin Old Trafford, sida uu sheegay tababarihiisii ​​hore ee dhalinyarada Ian Forder .
Elanga, oo 19 jir ah, ayaa sideed jeer u saftay kooxda waaweyn, oo uu ku jiro kulankiisii ​​​​ugu horeysay ee Premier League ee uu ku soo bilowdo barbarihii 2-2 ee Aston Villa isbuucii hore.
Ka dib markii uu u soo guuray England 2013 waddankiisii ​​​​Sweden, Elanga wuxuu ku biiray Hattersley FC, oo waqtigaas, uu tababare u ahaa Forder.
Forder ayaa sheegtay in Man City ay tahay kooxdii ugu horeysay ee soo bandhigtay xiisaha ay u qabto saxiixa Elanga, ka hor inta aysan waalid iyo indha indheeye xiriir la sameynin madaxa kormeerayaasha Man United, ka dib markii ay daawadeen isagoo ciyaaraya kulan maxalli ah.
“(Manchester) City ayaa markii hore muujisay xiisaha, waxaana uu la qaatay tababaro yar,” Forder ayaa u sheegay The Sun.
“Waxaan markaas lahaa kooxda 14-jirada, runtiina ma ahayn inaan la ciyaaro isaga – laakiin uma ogolaanayn inuu u ciyaaro qof kale.
“Mid ka mid ah waalidiinta ayaa ahaa indha-indheeye, wuxuuna la xiriiray madaxa kormeerayaasha United, kaasoo eegay isaga, waxaan u maleynayaa inay ahayd guuldarro 8-1 ah, laakiin Anthony wuxuu ahaa mid aad u wanaagsan.”
Sidoo kale xilli ciyaareedkan waxa uu matalay kooxda waa wayn,Elanga waxa uu u soo ciyaaray kooxda da’yarta ee United,waxa uu u dhaliyay shan gool,waxana uu diiwaan gashaday saddex caawin 10 kulan oo uu saftay.